Topnews:- Madaxweyne Garguurte oo Ganacsatada ku amray inay Canshuurta ku shubaan Account Dubai- Marshal Low ?
Topnews:-Madaxweyne Garguurte oo Ganacsatada ku amray inay Canshuurta ku shubaan Account Dubai- Marshal Low ?
21 Febraury 2013 Waagacusub.com- Ganacsatadda badeecadaha kala dega Dekadda Muqdisho ayaa lagu amray inay lacagta Canshuurta ku shubaan Account Bank uu Dubai ka furay Madaxweynaha Somalia Hassan Mohamud Alasow. Hassan Mohamud wuxuu Maareeyaha Dekadda ku amray inay badeecadaha la bixi karaan ganacsatada wadata Dukumiinta cadeeynaya inay Canshuurta ku shubeen koontada uu ka furay Dubai.
Koontada uu furay Madaxweyne Garguurte waxaa lacag ka bixin kara kaliya isaga sidoo kalena waxaa Bajadka Dowladda Maamulaya Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda Amaal Biyamaaleey sida Waagacusub xaqiijisay.
Go-aanka Madaxweynaha ayey qaar ka tirsan golaha Wasiiradda ku tilmaameen Inqilaab dhaqaale halka Siyaasiyiin badana ku fasireen Marshal Low uu ku rogay dhaqaalaha Dowladda si uu cunaqabateyn u saaro Ra'isulwasare Saacid.
Gudoomiyahii Bankiga dhexe Mr Cabdi Salaan oo ka biyo diiday amar uu Madaxweyne Hassan ku siiyay inuu lacag ku bixin karin saxiixa Ra''isulwasaraha iyo Wasiirka Maaliyadda ayaa xilkii uu ka qaaday.
Masuulka laga qaaday xilka Bankiga dhexe oo Duq Magaalo ku xigeen ka soo noqday Magaaladda New York ee dalka Mareykanka waxaa lagu sifeeyaa nin adag oo musuqmaasuqa iyo sharci darada neceb.
Si kastaba ha ahaatee,Dhaqaalahii Dowladda Federalka wuxuu ku aruuray gacanta Madaxweynaha ,waxaana dad badan isweydiinayaan waxa xigi doona.